Madaxweyne Denni oo ka tacsiyeeey geeridii xildhibaan Maxamed Faarax Mire – DMS
HomeWararkaMadaxweyne Denni oo ka tacsiyeeey geeridii xildhibaan Maxamed Faarax Mire
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo ka tirsanaa Xildhibaanada gollaha wakiilada Puntland oo habeenkii xalay ahayd ku geeriyooday deegaanka Al-xamdullilaahi, kadib shil gaadhi oo uu ku galay deegaankaasi.
Sidoo kale madaxweyne Denni ayaa tacsi u diray qoyskii, qaraabadii uu ka baxay xildhibaanku iyo dhammaanba shacabka Puntland, waxaana uu alle uga baryey xildhibaanka in uu ka waraabiyo janadiisa Fardowsa.
Allaha u naxariistee xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo ka tirsanaa xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa ku geeriyooday shil gaadhi oo ka dhacay duleedka deegaanka Al-xamdullilaahi, kadib markii ay isku dhaceen gaadhi uu watay marxuumku iyo gaadhi kale oo ah nooca xamuulka qaada xili uu kusii jeeday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Xildhibaan Maxamed Faarax Mire ayaa waxaa laga soo doortay deegaano kamid ah gobolka Bari, waxaana uu kamid ahaa Baarlamaanka Shanaad ee dowladda dowladda oo badankood lasoo xulay dhamaadkii sanadkii hore ee 2018 ka hor inta aysan dhicin doorashadii madaxtinimada Puntland ee 8-dii bishii January.
DEG DEG:Madaxweyne Denni oo kasoo baxay madaxtooyada Puntland & Xafiisyo kala duwan oo uu booqday